Zavatra nahariharin’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy (1-3)
Fiarahabana ny fiangonana fito (4-8)
“Izaho no Alfa sy Omega” (8)
Nentin’ny fanahy masina ho any amin’ny andron’ny Tompo i Jaona (9-11)
Fahitana an’i Jesosy be voninahitra (12-20)
1 Ny zavatra nahariharin’i* Jesosy Kristy, sady nomen’Andriamanitra azy,+ mba hampisehoana amin’ny mpanompony+ ny zavatra hitranga tsy ho ela. Nirahiny ny anjeliny ka nasainy nampiseho an’ilay izy tamin’i Jaona mpanompony,+ tamin’ny alalan’ny famantarana. 2 I Jaona kosa vavolombelona nampita ny tenin’Andriamanitra sy ny porofo nomen’i Jesosy Kristy, izany hoe ny zava-drehetra hitany. 3 Sambatra izay mamaky mafy sy mihaino ny teny ato amin’ity faminaniana ity ka manaraka an’izay voasoratra ato anatiny,+ fa efa akaiky ny fotoana voatondro. 4 Izaho Jaona dia manoratra ho an’ny fiangonana fito+ any amin’ny faritanin’i Azia hoe: Ho aminareo anie ny hatsaram-panahy miavaka* sy ny fiadanana avy amin’Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy,+ sy avy amin’ny fanahy fito+ eo anatrehan’ny seza fiandrianany, 5 ary avy amin’i Jesosy Kristy, “ilay Vavolombelona Mendri-pitokisana”,+ “ilay lahimatoa amin’ny maty”,+ ary “ilay Mpitondra ny mpanjakan’ny tany!”+ Ho an’ilay tia antsika+ sy nanafaka antsika tamin’ny fahotantsika, tamin’ny alalan’ny rany,+ 6 ary nanao antsika ho fanjakana+ sy mpisorona+ ho an’ilay Andriamanitra Rainy, eny, ho azy mandrakizay anie ny voninahitra sy ny hery! Amena. 7 Ho avy miaraka amin’ny rahona izy.+ Ary hahita maso azy ny olona rehetra, na dia ireo nandefona azy aza. Noho izy, dia hikapo-tratra noho ny alahelo ny foko rehetra eto an-tany.+ Eny, Amena. 8 “Izaho no Alfa sy Omega”,*+ hoy i Jehovah* Andriamanitra, “Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ilay Mahery Indrindra.”+ 9 Izaho Jaona rahalahinareo, dia miara-mizaka fahoriana aminareo+ sy miray fanjakana+ aminareo ary miara-miaritra+ aminareo, noho izaho mpanara-dia an’i Jesosy.+ Dia teto amin’ny nosy antsoina hoe Patmo aho, satria niresaka momba an’Andriamanitra sady vavolombelona momba an’i Jesosy. 10 Nentin’ny fanahy masina ho any amin’ny andron’ny Tompo aho, ary naheno feo mafy hoatran’ny an’ny trompetra avy tao andamosiko, 11 nilaza hoe: “Izay zavatra hitanao dia soraty eo amin’ny horonam-boky, ka alefaso any amin’ny fiangonana fito atsy Efesosy,+ Smyrna,+ Pergamosy,+ Tyatira,+ Sardisy,+ Filadelfia,+ ary Laodikia.”+ 12 Dia nitodika hijery an’ilay niteny tamiko aho, ka rehefa nitodika aho, dia nahita fitoeran-jiro volamena fito.+ 13 Teo afovoan’ireo fitoeran-jiro ireo dia nisy toy ny zanak’olona+ nanao akanjo lava hatreny amin’ny tongony, sady nanao fehikibo volamena nanodidina ny tratrany. 14 Fotsy mangatsakatsaka hoatran’ny volonondry fotsy ny volon-dohany, hoatran’ny lelafo ny masony,+ 15 toy ny varahina voadio+ mamirapiratra ao anaty lafaoro ny tongony, ary tahaka ny feon’ny rano be ny feony. 16 Nisy kintana fito+ teny an-tanany ankavanana, ary nisy sabatra lava be roa lela+ sady maranitra nivoaka avy tamin’ny vavany. Ny tarehiny koa hoatran’ny masoandro faran’izay mamirapiratra.+ 17 Niankarapoka toy ny maty teo an-tongony aho, rehefa nahita azy. Dia nametraka ny tanany ankavanana tamiko izy sady niteny hoe: “Aza matahotra. Izaho ilay Voalohany+ sy Farany,+ 18 sy ilay velona.+ Efa maty aho,+ nefa velona mandrakizay mandrakizay izao,+ sady manana ny lakilen’ny fahafatesana sy ny Fasana.*+ 19 Soraty àry ny zavatra efa hitanao sy ny zava-mitranga amin’izao ary ny zavatra hitranga aorian’izany. 20 Ary izao ilay zava-miafina masina momba ny kintana fito efa hitanao teo an-tanako ankavanana sy ny fitoeran-jiro volamena fito: Ny kintana fito dia ny anjelin’ny fiangonana fito, ary ny fitoeran-jiro fito dia ny fiangonana fito.+
^ Grika: apôkalypsis. Avy amin’ny matoanteny midika hoe “mampiharihary.”